प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि हस्तक्षेप, आफैंले पढे नीति तथा कार्यक्रम « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि हस्तक्षेप, आफैंले पढे नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अभावमा सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक्कै वास्ता नगरेको प्रस्टिएको छ ।
चार खण्ड र ७२ बुँदामा विभाजन गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको व्याख्या गरेका छन् । ११ बुँदासम्म कोरोनामा घुमेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि बुँदा नंं. २७ सम्म मुलुकको राजनीति, एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई गाली, विपक्षी दलको आलोचना र पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बचाउ गरेका छन् ।
ओलीले त्यसपछि ४६ नंं बुँदासम्म सरकारका ‘उपलब्धि’ बारे चर्चा गरेका छन् । मेलम्ची, दरबार हाइस्कुल निर्माणलगायतका विषय उपलब्धिको सूचीमा परेका छन् । ४७ देखि ६९ नं. बुँदासम्म ओलीले आगामी बजेटका प्राथमिकता भन्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विसं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै क्रियाकलाप निर्देशित हुने बताएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण र उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
ओलीका अनुसार सरकारले विद्युत्मा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगन्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाह उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने सम्बोधनमा उल्लेख छ । विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिने र विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ७ : १६ बजे